تعاطي العقاقير واضطراب تعاطي المادة | USAHello | USAHello
تعاطي العقاقير واضطراب تعاطي المادة
اضطراب تعاطي العقاقير هو عند شرب الكثير من الكحول أو تناول الكثير من الأدوية. Your isticmaalka daroogada iyo khamriga Dhibayn jirkaaga iyo siyaabaha aad nolol xun oo saamayn ku.
اضطراب تعاطي العقاقير هو عند شرب الكثير من الكحول أو تناول الكثير من الأدوية. إن استخدامك للمخدرات والكحول يؤذي جسمك ويؤثر على حياتك بطرق سيئة.
Maraykanka gudihiisa, dadku waxay yiraahdaan in “Si Xun” Mukhaadaraadka ama khamriga la isticmaalo ayaa sidoo kale ka dhigan tahay wax badan, ama si xun u. ku xadgudubka muqaadaraadka loo tixgeliyaa iyo si xun u isticmaalka khamriga iyo isticmaalka mukhaadaraadka ee siyaabo kale oo ka dhigaya aad cabtid wax badan oo ka mid ah khamriga ama la tacaalida badan oo daroogada.
Isticmaal mid ah waxyaabaha la on caafimaadkaaga iyo disorder noloshaada saameeya. Marka aad ku tiirsan daroogada ama khamriga, aad dareento in aadan ku noolaan karaan iyaga oo aan.
Calaamaduhu waa dareenka iyo isbedel in aad qabto xanuun dartii. Qaar ka mid ah calaamadaha cudurka daroogada waa:
Dulqaadanayn macnaheedu waa in aad cabto aalkolo badan ama ka qaadan daroogo dheeraad ah si ay u dareemaan saamaynta.
Dhibaatooyinka la xiriira hoos u soo baxay
-Barashadu waa marka aad dareento xanuun, maxaa yeelay, aad joojiso cabidda qamriga ama maandoriyaha. Waxaad dareemi jiran sababta oo ah jidhkaaga loo isticmaalaa in isticmaalka khamriga ama daroogada waxa ku jira.
Dhibaatooyinka odhan lahayn in ay daroogada iyo khamriga
Adag tahay in aadan cabbin aad u badan ama aad u badan oo daroogo cunaan. Ha ka qayb noloshaada caadiga ah u istaagi doonto hawlaha muhiim socday (Qoyska, Shaqada iyo isboortiga) Sababta oo ah isticmaalka khamriga ama daroogada.
Xitaa ma joojin markii wax xun
Waxaad sii wadaan in ay khamriga ama daroogada cabbi inkastoo aad u ogaato waxay saamayn taban ku leh noloshaada leeyihiin. Saamaynta xun yihiin marka ay wax ka sii xun. Tusaale ahaan, la cabo badan oo khamriga ka dhigaysa aad dareento xanuun, laakiin aad sii si kasta cabbi.
Haddii aad qabto khalkhal ah in isticmaalka qalabka, waxaad heli kartaa dhibaatooyin badan oo. Qaar ka mid ah dhibaatooyinka waa kuwan:
Waxaad naftaada ama qof kale oo dhaawici kara.
Bilow si aad u hesho dhibaatooyinka caafimaadka. Tusaale ahaan, haddii aad cabto khamro badan, waxaad heli kartaa dhibaatooyin beerka ama maskaxda ama wadnaha ama caloosha.
Your isticmaalka khamriga ama daroogada ka dhigaysa aad joojiso barbarta waxqabad joogto ah. Tusaale ahaan, waxaad joojin doontaa inaad ka socday kulan ciyaaraha ilmahaaga sababta oo ah isticmaalka khamriga ama daroogada.
Your isticmaalka khamriga iyo daroogada on ganacsigaaga iyo qoyskaaga saameeyaa. Tusaale ahaan, ma ay shaqeeyaan, sababtoo ah isticmaalka khamriga ama daroogada tago.
أسباب تعاطي العقاقير واضطرابات تعاطي المخدرات
Waxaa jira sababo badan oo ka dhigi aad qabto cudurka isticmaalka mukhaadaraadka. Qaar ka mid ah sababahaas:
Khamriga iyo daroogada ayaa laga heli karaa meesha aad meesha aad ku nooshahay. Tusaale ahaan, magaalo oo dalka Mareykanka ah waxaa ku jira qaar badan oo ulihiina wuxuu ku. Dad badan waxay jecel yihiin in si gudban ka tago saaxiibadood. Cabitaanka khamriga waa wax dadka u maleyso inay tahay madadaalo, taas oo sharci ah. Easy si ay u helaan khamriga sababtoo ah waa qayb ka mid ah nolosha.
Haddii mid ka mid ah waalidiinta aad cudurka qaba cudurka ama maandoriyaha waxaa ku dhaca cudurka, waxaa ka hawl yar in ay leeyihiin mid ka mid ah.
caadi ahaan waxaad iyaga ka dhigi. Caado waa wax aad si joogto ah u sameeyaan sida cadayashada ilkaha ka hor hurdada. Tusaale ahaan, haddii la cabo khamriga si aad u dareemeynin yar dareemayaasha oo ka dhigaysa in aad ku faraxsan dareento, aad waxaa laga yaabaa in ka badan bilowdo maxaa yeelay, aad rabto in aad cabto sida aad dareemeyso.
Waxaa jira tartan kale oo caafimaadka maskaxda. Haddii aad qabto cudur kale maskaxda, isticmaalka khamriga ama daroogada, is-daawo. Is-daweynta waa marka ay isticmaalaan qamriga ama maandooriyaha si ay u dareemaan wanaagsan.
Waa maxay caafimaadka dhimirka?
Sida loo helo adeegyada daryeelka caafimaadka maskaxda iyo taageero